केटाहरुलाई दिएको पैसा नउठेपछि दीपक मनाङेले बुझाउन सकेनन् सम्पत्ति विवरण « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसके पनि दुई मन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण अझैँ बुझाएका छैनन् । सार्वजनिक पपद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि दीपक मनाङे (राजीव गुरूङ) सँगै भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले सम्पत्ति विवरण किन अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् त ?
आइतबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङेले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमामन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना भइसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बारे मुख खोलेका छन् । उनले सम्मेलनमा अरूलाई दिएको पैसा नआएकाले विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
उनले कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘पहिला बिजनेस गर्दा केटाहरूलाई लगानी गर्दिन्थेँ । धेरै यस्तो पैसा छ मसँग जुन आएको छैन । आउनेवाला छ भनेर लेख्न पनि गाह्रो । रामेले दुई लाख, श्यामेले तीन लाख लगेको छ भनेर कसरी लेख्ने ? मेरो नाममा केही छैन । मेरो नाममा केही छैन भनेर अरूको नाममा राखेको भन्ने होइन ।’
मन्त्री गुरूङले सम्मेलनमै पैसा आउन बाँकी रहेकाले विवरण नपठाउन सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । सचिवालयले भने भोलि सोमबारसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसकिने बताएको छ ।